Body-on-frame 4WD SUV စစ်စစ်လား
Safety ပိုင်းအပြင် သက်သောင့်သက်သာနဲ့ မောင်းမယ်စီးမယ်ဆို
အားလုံးလည်းပြီးပြည့်စုံတဲ့7Seater လား
သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ထပ်ပါတာပေးဦး လို့တောင်းစရာမလိုအောင်
တန်ဖိုးနဲ့ အကျိုး ညီမျှပြီး
Sporty looks နဲ့ ရှော်တီတွေအတွက်ပါဂျွတ်တဲ့ compact sedan လေး လား
ဒီနေ့မှာတော့ TOYOTA ရဲ့ 2020 Models3ခုကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဘာ models တွေလဲ? အရင် Models တွေနဲ့ ဘာတွေကွာသွားမလဲ?
ဈေးနှုန်းတွေ၊ ကွာခြားချက်တွေမပြောခင်မှာ အခုကျွန်တော် မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Toyota တွေကို ဘယ်ကဝယ်ရမလဲလို့ မေးတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။
ဝယ်ဖို့အတွက်တင်မဟုတ်ဘူး၊ ဝယ်ပြီး နောက်ပိုင်းကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ after sales service တွေ maintenance service တွေအတွက်ပါ အကောင်းဆုံး​ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ စိတ်ချရတဲ့ Toyota Aye & Sons ကသာဝယ်ပါလို့ ဒီနေရာကနေ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်။
အခုစတင်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ အားလုံးလည်းရှေ့မှာတွေ့ကြရတဲ့အတိုင်း
ရုပ်ထွက်ပိုင်း ပိုလန်းလာတယ်၊ ပိုကြမ်းလာတဲ့ Toyota Fortuner 2020 ပါ။
ပြောင်းလဲတိုးတက်တာတွေကို တိတိကျကျလေးသိရစေဖို့အတွက် Toyota Aye & Sons က ညီမငယ် မဇူးဇူး ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ ညီမရေ။ Fortuner 2020 က ရှေ့ရောနောက်ရော design ပိုင်းတော်တော်လေး ပြောင်းသွားတာပဲဗျ။
မင်္ဂလာပါရှင့်၊ တိတိကျကျလေးပြောရရင် ရှေ့ bumper ၊ အပေါ်နဲ့ အောက် grille ၊ Headlamps တွေ၊ နောက် bumper နဲ့ Aluminum Wheel design တွေ အားလုံးက အသစ်ဖြစ်သွားတယ်။
ကြည့်ရတာ ပိုပြီးထက်ထက်မြက်မြက်၊ ကြမ်းကြမ်းရှရှပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ မီးတွေကရော?
ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ၊ Low beam, High beam, Day Time Running Lights တွေအပြင် Fog Lamp ပါ LED ဖြစ်သွားပါပြီ။ Indicator တခုပဲ halogen ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘေးဘက်ကကြည့်ရင်လည်း တော်တော်ကြီးကြွားတာပဲ။ Dimensions လေးတွေပြောပြပါဦးဗျ?
Fortuner 2020 က အရှည် ၁၅ ပေကျော် ၁၆ ပေနီးပါး၊ အကျယ်က ၆ ပေသာသာရှိပြီး ၆ ပေစွန်းစွန်းလောက်မြင့်ပါတယ်။
ခွေတွေကလည်း လှတယ်နော်။ Ground Clearance ကလည်းမြင့်မယ့်ပုံပဲ။
၁၈ လက်မ Design အသစ်နဲ့ aluminum ခွေတွေပါ။ Ground Clearance က ၁၁ လက်မနီးပါး လွတ်ပါတယ်။ နောက်မီးတွေကလည်း LED combination lamps တွေပဲရှင့်။ နောက် design ကလည်း ပိုလှလာပါတယ်။
ပိုလှလာတာထက် ပိုကြွလာတာလို့ဆိုရမယ်ဗျ။ အဓိကက ဒီအနက်ရောင် chrome မှာ အနက်ရောင် Fortuner ဆိုတဲ့ဖေါင်းကြွစာလုံးပဲဗျ။ ကြည့်ရတာ ပိုမိုက်သွားတယ်။ ဒီ Fortuner 2020 ရဲ့ Performance ပိုင်းလေးကို အမြည်းလေးပြောပါဦးဗျ။ Body-on-frame SUV စစ်စစ်ဆိုတော့လေ။
ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ ဒီကားမှာက 2.8 L 1GD-FTV Diesel Engine ကိုသုံးထားလို့ ရုန်းအားဆွဲအားလည်းကောင်းသလို ဆီစားနှုန်းကလည်း သက်သာတယ်ရှင့်။ 6-speed Automatic transmission နဲ့ဖြစ်ပြီး 4WD ကားဖြစ်တဲ့အတွက် 2H, 4H, 4L လိုသလိုပြောင်းလဲမောင်းနိုင်တဲ့အပြင် differential lock လည်းပါတဲ့အတွက် ဘယ်လိုလမ်းမျိုးကိုမဆို မောင်းလို့ရပါတယ်ရှင့်။ Eco Mode နဲ့ Power Mode ဆိုပြီး driving mode နှစ်မျိုးပြောင်းလို့ရလို့လည်း ဆီစားသက်သာတာပါရှင့်။
Consumers reports တွေမှာတော့ 11-13 km/l လောက်အထိရတယ်လို့ ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒီလိုကားမျိုးအတွက်ဆို ဆီစားနှုန်းတော်တော်လေးသက်သာတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကားရဲ့အတွင်းခန်းက တော်တော်လေး quiet ဖြစ်တယ်နော်။
ဟုတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Drivetrain ကလည်း ဆူညံသံလျော့နည်းသွားအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ နောက်တချက်က ရှေ့မှာ Double Wishbone နဲ့ နောက်မှာ 4-link Coil Spring suspensions တွေသုံးထားကြောင့်လည်း အသံဆူညံမှုနည်းသွားတဲ့အပြင် ငြိမ့်ညောင်းမှုကိုပါ ရရှိစေပါတယ်။
Air-con က Auto နော်။ Round ရောရလားဗျ။
ရှေ့ရော နောက်ပါ Air Conditioning ရပါတယ်ရှင့်။
Infotainment က ၈ လက်မပါ။ Apple CarPlay, Android Auto ရပါတယ်။ Miracast လည်းရတော့ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ဆိုတာ ဘာမှစိတ်ပူစရာကိုမရှိတော့ပါဘူး။ Hand-free function လည်းပါတယ်။ အသံထွက်လည်းကောင်းတယ်။ နောက်ပြီး Navigation စနစ်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။
ဒါ တော်တော်ကြီးမိုက်သွားပြီဗျ။ ထားစရာနေရာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်နော်။ အားလုံးမှာကျနော်အကြိုက်ဆုံးက ထိုင်ခုံတွေဗျ။ Leather ထိုင်ခုံတွေဖြစ်သွားပြီ။ Electric Motor Adjustment တွေဖြစ်သွားပြီ။ အဲဒီဘက် Passenger Seat ရော Power Adjustment ပဲလား။
ဟုတ်တယ်ရှင့်၊ နောက်ဖုံးကလည်း Electric Motor နဲ့ပါပဲရှင့်။
လုံးဝကို အကျယ်ကြီးပဲဗျာ။ Safety ပိုင်းအတိုချုံးလေးလည်းရှင်းပြပါဦး။
Sales Person - Toyota Safety Sense အပြည့်ပါတဲ့ Fortuner 2020 ပါရှင်။ Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Alert သုံးခုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ TSS ပါ။
Pre-Collision တို့ဘာတို့က safety ပိုင်းအရေးကြီးတာမှန်ပေမဲ့ Dynamic Radar Cruise Control ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲဗျ။
နောက်ပြီးပါနေကျ Brake Assist နဲ့ ABS, Hill Start Assist Control, Emergency Brake Signal, Vehicle Stability Control, Downhill Assist Control, TSC စတာတွေလည်းပါသေးတယ်ရှင့်။ လေအိတ်ပတ်လည်ပါသလို security equipment အသစ်အနေနဲ့ Immobilizer system နဲ့ Security Alarm စနစ်တွေထပ်ပါပါသေးတယ်။
ပြည့်စုံတာထက်တောင် လွန်နေသေးတယ်လို့ပြောရမယ်။ အရေးကြီးတာတခုပဲကျန်တော့တယ်။ ဘယ်လိုရောင်းလဲဗျ။
Toyota Fortuner 2020 ကားတန်ဖိုးသီးသန့် ဈေးနှုန်းက $56,700 ကနေစတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လမ်းကြမ်းရော လမ်းချောရော ဘယ်လိုလမ်းမျိုးမဆို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ သက်သောင့်သက်သာလည်းဖြစ်ရမယ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြင့်နဲ့လည်း မောင်းချင်တယ်၊ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး Design လည်းအမိုက်စားထဲကဆိုရင် Toyota Fortuner 2020 က အသင့်တော်ဆုံးပဲဗျ။ ကဲအခုကတော့ Innova အသစ်ကလေးအလှည့်ပါ။
Innova ကျတော့ ရုပ်ပိုင်းဒီလောက်ကြီးပြောင်းသွားပုံမရဘူးနော်ညီမ။ မီးတွေတော့ပြောင်းသွားပြီနဲ့တူတယ်။
2019 တုန်းက4Bulb Halogen Multi ကိုသုံးထားတာ။ အခုကတော့ LED projector နဲ့ Halogen ပေါင်းထားတာဖြစ်သွားပါပြီ။​ ဒါ့အပြင် Headlamps level ချိန်တာတွေ၊ Follow me home စနစ်တွလည်းပါလာပါပြီ။
ဝိုး… Fog lamps တွေကလည်း LED ဖြစ်သွားပြီနော်။ သူက ကျွန်တော့်အမြင်ပေါ့လေ၊ LED ဖြစ်သွားရုံတင်မကဘူး ရှေ့ရုပ်ကိုလည်း ပိုပြီး Modern looks ဖြစ်သွားစေတယ်လို့ ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။
မီးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နည်းပညာအမြင့်တွေကို သုံးလိုက်တဲ့အတွက် Design ပိုင်းကလည်း ပိုမြင့်သွားတဲ့ သဘောပါရှင့်။ ကျန်တဲ့ exterior အပိုင်းမှာတော့ သိပ်ပြီးထူးထူးခြားခြားပြောင်းသွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ Rim design ကတော့ အသစ်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ ခုနကကြည့်တဲ့ Fortuner မှာရော၊ အခု Innova မှာရော မီးတွေက design နဲ့ နည်းပညာ ပြောင်းလဲတိုးတက်သွားတယ်။ ခွေ design တွေကအသစ်တွေချည်းပဲ။ ဘယ်လောက် size လဲဗျ။ 16-inch ဖြစ်မယ်၊ ဟုတ်တယ် 16-inch ဗျ။ အတွင်းခန်းမှာရော ပြပေးပါဦး။
အတွင်းခန်းမှာတော့ အစ်ကိုတွေ့တဲ့အတိုင်း ထိုင်ခုံတွေက Fabric မဟုတ်တော့ဘူး။ Leather တွေဖြစ်သွားပြီ။
ထိုင်ရတာပိုပြီး ease ဖြစ်လာတယ်။​ နောက်ထိုင်ခုံကြီးက အလန်းကြီးဗျ။ ပိုကြီးလာတယ်။ ဟုတ်တယ်မလား။
ဟုတ်တယ်ရှင့်။ Second seats နှစ်လုံးက captain seats တွေပါ။ Power adjustments နဲ့ပါ။
Third row ကိုသွားဖို့ အလယ်မှာလျှောက်လမ်းပါတယ်။ ခုံကို ခေါက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
ဒီအချက်ကိုတော့ တော်တော်ခိုက်သွားပြီ ညီမရေ။ အားလုံးအကြိုက် ၇ ယောက်စီး။ ၇ ယောက်စီးကိုမှ space တွေကအကျယ်ကြီး။ အကျယ်ကြီးကိုမှာ second row seats တွေက captain seat အကြီးကြီးတွေ။ နောက်ပြီး leather တွေနဲ့။ ဒီအချက်ကတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ Innova ရေလို့ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး 2019 တုန်းက ရိုးရိုးသော့နဲ့စက်နှိုးရတာပါ။ အခုတော့ Push Start နဲ့ဖြစ်သွားပါပြီ။ ထုံစံအတိုင်း Infotainment, Auto Air-Con, Round Air-Con တို့လည်းပါပါတယ်။
2019 နဲ့ 2020 ဒီလိုအချက်ကလေးတွေကွာတယ်ပေါ့။ ကျန်တဲ့ အင်ဂျင်အကြောင်းလေး နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဦး။ အတိုချုံးပေါ့။
Powerful လည်းဖြစ် fuel efficient လည်းဖြစ်တဲ့ VVTi engine ကိုသုံးထားပါတယ်။ 2.0 L 1TR-FE ပါ။ 6-speed automatic transmission နဲ့မို့လို့ ဂီယာအကူးအပြောင်းလဲ ညက်ညောပါတယ်။ Safety ပိုင်းမှာလည်း Toyota တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း စိတ်ချယုံကြည်ရပြီး Airbags ဆို ၇ လုံးတောင်မှာတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်ရှင့်။
လူများများတင်မယ့်သူတွေအတွက်တော့ အလန်းစားကြီးပဲဗျ။ ဈေးနှုန်းကလေးလည်းပြောပေးပါဦး။
Toyota Innova 2020 ကားတန်ဖိုးသီးသန့်ဈေးနှုန်း ကတော့ $34,100 ကနေစတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်း ကောင်းမွန်မယ်၊ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမယ်။ အဆင့်မြင့်ကားအတွင်းခန်းလည်းရမယ်။ Model အဟောင်းထက် ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်မယ်၊ ပိုပြီးငြိမ့်ညောင်းမယ်။ အဓိကကတော့ လူခုနစ်ယောက်တင်မယ်။ Captain Seat တွေပါရမယ်ဆိုတော့ Innova 2020 ဟာ ကျွန်တော့်အမြင် လူတိုင်းကြိုက်မယ့်ကားလေးပါပဲဗျာ။
ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ compact sedan လေးကိုသွားကြည့်ကြစို့လား။
ကျွန်တော်ကို Toyota ရဲ့ Vios 2020 နဲ့ Vios 2019 တို့ရဲ့အဓိက ကွာခြားချက်ကလေးတွေပေါ့၊ တချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးဗျ။
Vios ရဲ့ Exterior မှာအဓိက ပြောင်းလဲသွားတာကတော့ ရှေ့ရုပ်ပါပဲ။
Grille ကပိုကြီးသွားတယ်။ အောက်စု အပေါ်ကားသွားတဲ့ပုံစံကနေ အောက်ကား အပေါ်စုသွားတဲ့ Lexus တွေက X ပုံစံ Grille နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်။
Model အဟောင်းမှာတုန်းက Projector Halogen မီးကြီးတွေနေရာမှာ 3-tier LED Headlights တွေဖြစ်သွားတယ်။
Headlights တွေပြောင်းသွားတာကတော့ တကယ်ကို ရှယ်ပဲဗျ။ ရုပ်ထွက်က ကြွတက်သွားတယ်။
Sales Person - ဟုတ်တယ်ရှင့်။​ Fog lights တွေကလည်း ပိုကား ပိုကြွားသွားတယ်။
ရှေ့ရုပ်ကို ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် sporty looks ပိုဖြစ်သွားတယ်။ 2019 က ရိုးရိုး compact sedan ရုပ်ဆိုရင် အခု 2020 က sporty compact sedan လိုဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်။
Sales Person - ဟုတ်ပါတယ်အစ်ကို။ အတွင်းခန်းလေးကိုဝင်ကြည့်ပါဦးရှင့်။
Infotainment လေးက resolution မဆိုးဘူးဗျ။ ဘာတွေရမလဲ။
Infotainment က 6.8-inch ၊ AUX, USB နဲ့ Bluetooth တွေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်။ Air-con က LCD display နဲ့ Automatic ပါ။ Cup holder မှာ LED Shower light တွေလည်း ပါပါသေးတယ်။
Interior မှာ အဓိက ပြောင်းလဲတိုးတက်သွားတာက back camera တပါတည်းပါလာတာရယ်၊ Air vent နဲ့ digital air con ပုံစံက နည်းနည်းလေးပြောင်းပြီး ပိုခေတ်မီသွားတာရယ် နောက်တခုက နောက်ထိုင်ခုံကသူတွေအတွက် USB charging ပေါက် နှစ်ပေါက် ပါလာတယ်ရယ်ပါ အစ်ကို။
Back camera နဲ့ နောက် cabin အတွက် USB ပေါက်တွေ ပါလာတာလေးက ကျေနပ်စရာဗျ။ Parking ထိုးဖို့အတွက် ပိုလွယ်သွားမယ်။ Smartphones တွေ mobile devices တွေ အသုံးများတဲ့ခေတ်မှာ charging ပေါက်ကလည်း မရှိမဖြစ်လိုတာပါ။ Engine room လေးလည်းကြည့်ပါရစေဗျ။ Engine ပိုင်းလေးလည်း ပြောပြပေးပါဦးဗျ။
Toyota Vios 2020 မှာက 1.3 L Dual VVTi ဓါတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့။ Transmission ကတော့ CVT ပါ။
Safety ပိုင်းအနေနဲ့ Airbag ၇ လုံးပါတယ်။ ASEAN NCAP5stars ရထားတဲ့ Rigid GOA frame ကိုသုံးထားတယ်။
Vehicle Stability Control VSC အပြင် Toyota ထုံးစံအတိုင်း ABS, EBD, BA, HAC အကုန်ပါ ပါတယ်ရှင့်။
Safety ပိုင်းကလည်း ကောင်းသားပဲ။
ဆိုတော့ features တွေအရဆိုရင် တန်ဖိုးသင့်ကားတစီးအနေနဲ့ အားရစရာပဲဗျ။ အရေးကြီးတဲ့ ဈေးနှုန်းလေး ပြောပြပေးပါဦး။
ဈေးနှုန်းကတော့ ရိုးရိုးအဖြူရောင်ကလွဲရင်တော့ $21,200 ပါရှင့်။ အဖြူရောင်လေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ $20,900 နဲ့ရမှာပါ။ အရောင်တွေကတော့ (ရနိုင်မယ့်အရောင်တွေပြောရန်) တွေရနိုင်ပါတယ်။​ အရောင်အသစ်အနေနဲ့ကတော့ platinum white pearl လေးရနိုင်ပါတယ်။ ပုလဲပေါက်လေးပေါ့။ အရမ်းလှတယ်ရှင့်။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ရိုးရိုးအဖြူရောင်နဲ့ platinum white pearl က $300 ပဲကွာတာမလား။ ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ platinum white pearl လေးကိုပဲယူဖြစ်မှာဗျ။ သူက ပိုပြီးထူးခြားတယ်။ ပိုပြီးလည်း grand ဖြစ်သွားတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ဘယ်ပဲရွေးရွေးပါ၊ ဈေးနှုန်းနဲ့ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေအရ ထိုက်တန်ပြီး ဈေးကွက်ဝေစု တော်တော်လေးရနိုင်မယ့် Vios 2020 လို့ဆိုလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာ။
အခုလို ရှင်းပြပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေလည်း Toyota ကားသစ်တွေကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ ဘယ်လိုဝယ်လို့ရမယ်ဆိုတာကိုပါ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ မသိသေးသူတွေအတွက်ပါ။
ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ မှာ စိတ်ကြိုက်စုံစမ်း ကြည့်ရှု ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပဲပေးချင်တာကတော့ ကျွန်မတို့ Toyota Aye & Sons ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တခုပါ။
အခုဆိုရင် Toyota ရဲ့ Fortuner, Innova, Vios 2020 တွေနဲ့ 2019 တွေ ဘာတွေကွာသွားလဲ၊​ ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်လဲ၊ ဘယ်လိုဝယ်နိုင်သလဲဆိုတာတွေကို အားလုံးလည်းသိရှိသွားမယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကားအသစ်ဈေးကွက်မှာ ဒီလိုမျိုးထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးတွေကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် Toyota Aye & Sons ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျွန်တော်ဒီနေရာကပြောပါရစေ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ အကြမ်းစားအလန်းစားကြီးဆိုရင် Fortuner 2020,7Seater ထဲကဆိုရင် Innova 2020 နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစီးဖို့ဆိုရင် Vios 2020 တို့ဟာ ရွေးချယ်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးတွေထဲက အကောင်းဆုံးတွေပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲ ဒီ soft launch ကလေးကို နိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာပြီး Covid-19 ဘေးမှကင်းဝေးကြပါစေ။
Toyota Cars ကားတွေကို အောက်ပါ Link ကနေလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာဝယ်ယူဖို့ဆိုရင်တော့
▷ Address: No. 87(A), Kaba Aye Pagoda Road, Near Pearl Condo, Yangon
▷ Phone : 01 500 950, 01 502 206
New Cars from TOYOTA&#39;s Myanmar Dealers and can connect direct for enquire and test-drive